Otú nyefee kọntaktị, ozi ndị ọzọ si Samsung ka iPhone
Ị bụ Samsung ofufe na-ekpebi bulie ihe iPhone, dị ka iPhone 6s, n'ihi na a mgbanwe? Otú ọ dị, na-eme ka ịmafe n'etiti iPhone na Samsung bụ ihe zuru ezu na ogologo usoro, ruru ha iche iche nyiwe. Nyefee kọntaktị site na Samsung ka iPhone nwere ike na-akpa nsogbu ị zutere. Nkụda mmụọ banyere eziokwu a? Mụọ amụ. Ebe a bụ ezi ihe ngwọta na-enyere gị aka ọ bụghị nanị transfer kọntaktị, ma detuo videos, photos, kalenda, music na ozi ederede site na Samsung ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS, na Anglịkan effortlessly. Ebe a bụkwa a zuru ndu banyere otú ị pụrụ nyefee data n'etiti ọ bụla color mfe na n'enweghị.
Ihe Ị Mkpa Nyefee Ndi ana-akpo
Gị Samsung ngwaọrụ & iPhone
Abụọ USB cables
A na kọmputa na iTunes arụnyere
Ngwọta Otu: Nyefee Samsung Ndi ana-akpo ka iPhone na Google Akaụntụ
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ mkpa nyefee kọntaktị site na Android ka iPhone, nke a pụrụ ịbụ nnọọ mfe nakwa free. Ka anyị nile maara, anyị na-eji Google akaụntụ ibudata ngwa site Google Play nke pụtara ọtụtụ n'ime anyị nwere ndị Google akaụntụ na aka. Site n'enyemaka nke ya, anyị nwere ike mfe nyefee kọntaktị site ọ bụla Android ntị ka iPhone (iPhone 6s na iPhone 6s Plus gụnyere). (Leekwa: otú nyefee kọntaktị site na Android ka Android.)
Lee ndị dị mfe nzọụkwụ ị pụrụ ịgbaso nyefee kọntaktị na iPhone:
Gaa na Ntọala ma họrọ akaụntụ ma ọ bụ simliar nhọrọ.
Tinye Gmail nkọwa akaụntụ ma mee mmekọrịta, ekwentị gị kọntaktị ga-amalite ka mmekọrịta ka Google ana-akpo.
Mgbe ahụ na-aga gị iPhone ma họrọ Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda na pịnyere gị Gmail nkọwa akaụntụ.
Dị nnọọ sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị, i nwere ike ịhụ gị niile Samsung kọntaktị na-zigara gị iPhone.
Cheta na: Jide n'aka Ndi ana-akpo na-nyeere na nke a Gmail akaụntụ.
Ngwọta Abụọ: Nyefee Ndi ana-akpo si Samsung ka iPhone na Wondershare MobileTrans
Ọ bụrụ na ị bụghị nanị chọrọ nyefee kọntaktị, ma ndị ọzọ na faịlụ dị ka SMS, video, Music ka iPhone, na Wondershare MobileTrans nwere ike ịbụ ihe kasị oru oma na kacha ụzọ nweta na. Na dị nnọọ ole na ole dị mfe clicks, niile nke Android faịlụ nwere ike mfe kpaliri gị iPhone.
Nyefee kọntaktị site na Samsung ka iPhone na ụlọ ọrụ aha, Job aha, adreesị ụlọ, adreesị ozi-e, wdg
Detuo SMS, music, videos, kalenda, na foto site na Samsung ka iPhone.
Tọghata music na video ka iPhone enyi na enyi formats.
Fast transfer ọsọ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
Nkwado Samsung ngwaọrụ-agba ọsọ Android 2.1 na mgbe e mesịrị, na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS dabeere iOS 9/8/7/6/5.
Rịba ama: N'ihi na Mac ọrụ, plese agbalị Wondershare MobileTrans maka Mac.
Nzọụkwụ 1. Run desktọọpụ Wondershare MobileTrans
Ẹkedori desktọọpụ Wondershare MobileTrans on PC. Ị ga-ahụ bụ isi window dị ka ndị a. Pịa "na ekwentị Pone Nyefee".
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị Samsung na iPhone ka Computer
Jikọọ gị Samsung ekwentị ma ọ bụ mbadamba na iPhone na kọmputa site na iji eriri USB. Mgbe ghọtara, Wondershare MobileTrans ga-egosipụta gị Samsung ekwentị ma ọ bụ mbadamba ke akpan window.
Cheta na: Iji nyefee Samsung kọntaktị na iPhone, ị kwesịrị iji wụnye iTunes. Naanị otú a nwere ike ị nyefee kọntaktị were were.
Nzọụkwụ 3. Copy SMS, Music, Video, Photos, Kalinda na Ndi ana-akpo si Samsung ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Site ndabara, niile ọdịnaya i nwere ike nyefee na-enyocha. Ị nwere ike uncheck faịlụ ị na-achọghị nyefee, dị nnọọ ego na kọntaktị ma ọ bụrụ na gị na mkpa ha.
Mgbe ahụ, na-aga pịa Malite Copy na-amalite ịkwaga faịlụ (s) dị ka kọntaktị site na Samsung ka iPhone. Jide n'aka na ọ bụghị ịkwụpụ ma nke igwe n'oge dum transfer usoro. (Leekwa: Nyefee kọntaktị site na iPhone ka Samsung Galaxy)
Akwado Samsung na iPhone OS na ụdị
Akwado ekwentị ụdị
Site Android 2.1 ka Android 6.0 Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2, Cheta 4, Galaxy Cheta 3, Galaxy Cheta 2, Galaxy Cheta, Galaxy S, Galaxy Ace, Galaxy Nexus, Galaxy Ukwu Duos, na ndị ọzọ >>
Ọzọ Isiokwu banyere Samsung & iPhone
Nyefee Nokia Ndi ana-akpo ka Samsung Galaxy S3
Ibufee ọdịnaya site Nokia ka Android
Nyefee na Ndi ana-akpo ka New akporo ekwentị
Top 10 iPhone Nyefee Software
> Resource> iPhone> otú nyefee Ndi ana-akpo, SMS, Music na Ọzọ si Samsung ka iPhone